Waancaa Addunyaa 2018: Lukaakuu moo Poogbaa? Beeljiyeem moo Faransaay? - BBC News Afaan Oromoo
Hiriyoota lamaan Maanchister Yuunaayitidiif waliin taphatan fi waancaa adunyaarratti morkatoota tahan
Hiriyootni lamaan taphatootni Maanchister Yuunaayitid har'a biyyasaanii bakka bu'uun masaanuu tahuun falmii gaggeessu. Romeluu Lukaakuu fi Pool Labile Pogbaa. Taphatootni lamaan kilabii tokkoof taphachuurra kan darbe michuu waliiti.
Gareesaanii keessaa Taphatootni 13 ol gurrachota kan tahanii fi biyya Afrikaa bakka buutu tokko qofa hafe jedhamuun akka baacoottillee himamaa jiru Faransaay har'a Beeljiyeem waliin morkii taasifti.
Arjentinaa dorgommicha keessaa kan baste faransaay dargaggotashee kyilian Bappee,poogbaa, Gireezmaan fi Nigooloo Kaantee gahumsa guddarratti argaman qabachuun garee Roobertoo Maartineez, kan akka Lukaakuu,Keven De bruun ,Eden Hazard fi Vicent company waliin morkii cimaa taasisaa jiru.
Tapha har'aa irratti gareesaaniif taphatoota galchii lakkofsisuu danda'an
Akkasumas Nigooloo Kaantee fi Oliiver Jiruud taphattoota Cheelsii Faransaay bakka bu'uun miiltoosaanii Chelsiitti waliin taphatan Eden Haazaard fi Tiboot Koortohaa waliin morkata.
Faransaay garee cimaa Arjentinaa injifachuunshee, Beeljiyeemis waancaa adunyaa yeroo shan injifachuun sadarkaa 1ffarra kan jirtu Biraaziliin mo'attee darbuunshee bara kana garee cimaa qabatanii dhiyaachuusaanii agarsiisa jedhanii kan barreesanis jiru.
Dhalootni biyyoota lamaanii Waancaa Addunyaa Raashiyaa kana injifachuuf humna qabu kan jedhe ammoo gaazexessaa lammii Faransaay Filippee Ookleridha.
Xiinxaltootni kubbaa miilaa biroonis ammoo taphatootni ciccimoon biyyoota lamaanii falmii cimaa yommuu gaggeessan kaardii diimaa taphataan agarsiifamu jiraachuu danda'a jedhan.
Waancaa Addunyaa 2018 eenyutu mo'ata? Tilmaamaa
Taphataan Arsenaalii fi Baarseloonaa duraanii Faransaayif taphoota 123 irratti hirmaachuun galchiiwwan 51 lakkofsisee fi waancaa adunyaa injifate Teerii Heneriin gargaaraa leenjisaa garee biyyaalessaa Beeljiyeem tahuun biyysaa injifachuuf waan danda'e hunda gochaa tureera jedhama.
Tokko tokkoo taphatootaa waliinis marii taasiseera.
Heeneriin jireenyasaa fi tapha kubba miilaan irra caalaasaa Faransaayiin ala waan dabarseef federeeshinii kubba miilaa Faransaay waliinillee hariiroo gaarii hin qabu jedhe gaazexessaan Faransaay kun BBC Radio 5tti akka himetti.
Heeneriin biyyasaa Faransaay injifachuuf qophiirra jira
Faransaay tapha internaashinaalaashee beeljiyeem waliin taphachuu kan jalqabde waggootni 114 darbaniiru.Ergasii as falmii cimaan biyyoota lamaan gidduutti mul'ataa tureera.
Har'a kan injifatu Inglaandii fi Kirooshiyaa keessaa garee injifatu waliin xumura waancaaf kan taphatan taha.
Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Maark Lawuraansan tilmaama kenneen:
Faransaay 2 - 0 Beeljiyeem
Tapha boor gaggeeffamuunis:
Kirooshiyaan 1 - 2 Ingilaandi mo'atu jedheera.
'Nageenya keenyaaf Ameerikaan nu barbaachisti'